China High nkenke eriri laser ọnwụ igwe Nsukka na suppliers |UNIONLASER
Ụdị: High nkenke eriri laser ọnwụ igwe
Ụdị: UL3015 H
Ọnụ ahịa: $18999-$33999
1. Gantry mere nke seasoned ụgbọ elu aluminum.
Ihe owuwu nke gantry bụ nke aluminom ụgbọ elu nwere oge nke ejiri ike nke 4300 ton mee ya, na-enweta isi ike dị egwu.Aluminom ụgbọ elu nwere ọtụtụ uru: ịdị elu dị elu (karịrị nkedo ígwè), ịdị arọ dị arọ, corrosion na oxidation resistance na ezigbo machinability.
2. Akpaka elekwasị anya ọnwụ isi.
Autofocus - Akụrụngwa na-edozi oghere na-elekwasị anya na-akpaghị aka mgbe ị na-egbutu mpempe ígwè nke ọkpụrụkpụ dị iche iche.Ọsọ mgbado anya akpaaka dị okpukpu iri karịa ọsọ ntuziaka.
3.Welded bed mere nke akụkụ anọ profaịlụ.
Ike dị elu, nkwụsi ike, ike nkwụsịtụ, na-eme ka afọ 20 jiri ya mee ihe na-enweghị nrụrụ;
The akụkụ anọ tube mgbidi ọkpụrụkpụ bụ 10mm na arọ bụ 3000kg.
4. iPad imewe ihuenyo.
Ihuenyo nwere ngosipụta kwụ ọtọ na oge nzaghachi ngwa ngwa, ọdịiche dị elu, nlele sara mbara, obere ike oriri na mkpebi dị elu.Na mgbakwunye, ọ nwere ọkwa dị elu
nke nchapụta na ngosipụta dị ala, yana ogologo oge ka ukwuu.
Nlereanya UL-3015F H usoro
Ike Laser 3000w, 4000w, 6000w, 8000w
Ụdị Laser Raycus fiber laser isi iyi (IPG/JPT maka nhọrọ)
Sistemụ ịnya ụgbọ ala Japanese YASKAWA Servo moto
Usoro njikwa Ngwa Cypcut
1 Ụlọ ọrụ ịchọ mma
2 Ụlọ ọrụ ụgbọ ala
3 Ụlọ ọrụ mgbasa ozi 4 Ụlọ ọrụ kichin
5 ụlọ ọrụ ọkụ 6 Nhazi ígwè mpempe akwụkwọ
7 Akụrụngwa mgbatị ahụ 8 Ụlọ ọrụ ngwa ngwa
Ngwungwu na nnyefe:
1.Anti-collision ngwugwu onu: A na-ekpuchi akụkụ niile nke igwe na ụfọdụ ihe dị nro, karịsịa iji ajị pel.
2.Fumigation plywood igbe: Igbe osisi anyị na-ekpo ọkụ, ọ dịghị mkpa iji nyochaa osisi, na-azọpụta oge njem.
3.Whole igwe nkwakọ ngwaahịa ihe nkiri: Zere mmebi niile nwere ike ime n'oge nnyefe.Mgbe ahụ, anyị ga-ekpuchi ngwugwu rọba ahụ nke ọma iji hụ na a na-ekpuchi ihe dị nro, na-ezere mmiri na nchara.
Nke kachasị elu bụ igbe plywood nwere ndebiri edoziri.
Q3: Kedu isi iyi laser fiber UnionLaser etinyere?
IPG - Emere na USA.
Raycus- Mere na China;
Maxphotonics - Emere na China;
JPT- Mere na China;
Q4: Ọ bụghị adaba m na-aga China, ma m chọrọ ịhụ ọnọdụ nke igwe na factory.Kedu ihe m kwesịrị ịme?
Q5 : Amaghị m ka esi eji mgbe m nwetara ma ọ bụ enwere m nsogbu n'oge eji, otu esi eme?
Nke gara aga: 12000w 20000w eriri laser ọnwụ igwe
Osote: Robot eriri laser ọnwụ igwe